सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च ! तोलाको कति पुग्यो ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च ! तोलाको कति पुग्यो ?
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले एकपछि अर्को गर्दै नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेको छ। बिहीबार छापावाला सुनको मूल्यले ७७ हजार ६ सयमा पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ। बुधबार प्रतितोला ७७ हजार १ सय पुगेर नयाँ रर्कड बनाएको सुनको मूल्यले बिहीबार ५ सयले बढेर फेरि अर्को रेकर्ड बनाएको हो। त्यसैगरी, तेजाबी सुनको मूल्य ७७ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ।
चाँदीको मूल्य पनि १० रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार प्रतितोला ९ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज ९ सय १५ रुपैयाँमा कायम छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्य बढेको छ।
बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस १६ सय ३ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको सुन बिहीबार बढेर प्रतिऔंस १६ सय ९ अमेरिकी डलरमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले सुनको मूल्य अझै बढ्ने बताइरहेका छन्। नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पनि सुनको मूल्य अझै बढ्नसक्ने अनुमान गरेको छ।
दोलखाको प्रसिद्ध भीमेस्वर मन्दिरको शिलामा पसिना आएको छ । बिहिबार बिहान पौने ६ बजे देखि भीमेस्वर मन्दिरमा रहेको शिलामा पसिना आएको गुठि तथा व्यवस्थापन समितिका कोषअध्यक्ष सुरेश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
भीमसेनलाई पसिना आएपछि मन्दिर परिसरमा ठूलो सँख्यामा स्थानीय भेला भएका छन् । भीमसेनको शिलामा पसिना आएपछि स्थानीयवासी भेला भएर घण्टा र नगरा बजाउँदै कुनै अनिष्ट नहोस् भनेर कामना गर्ने र शिलालाई पँखाले हम्किने चलन छ ।
भीमसेनको शिलाको दायाँबाट पसिना आउँदा राष्ट्र, राष्ट्रप्रमुख, सरकारलाई र बायाँबाट पसिना आउँदा जनातामा अनिष्ट हुने प्रचलन रहेको छ ।
शिलामा पसिना आएको ६ महिना भित्र केहि न केही देशमा ठुला घटनाहरु भएको दावी गरिदै आएको छ । भिमसेनको शिलामा पहिलो पटक १९९० सालमा पसिना आएको थियो त्यस पटक भिमसेनको वायाँतर्फ पसिना आएकोले देशमा ठूलो भूकम्प गई जनतामा जनधनको क्षेति भएको स्थानीयहरू बताउछन ।
त्यसैगरी २०३५ साल फाल्गुणमा पसिना आउदा देशमा जनमत सग्रह भएको थियो । २०४५ साल चैत्रमा पसिना आउदा देशमा ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अत्य भइ देशमा बहुदलिय प्रजातन्त्र आएको थियो ।
२०५७ सालमा भने माघ १ र १५ गते भिमसेनलाई पसिना आएको थियो यसरी पसिना आएको ४ महिना नवित्दै दरवार हत्या काण्ड हुन भएको थियो ।
त्यसैगरी २०६१ साल फाल्गुणमा भिमसेनलाई पसिना आउदा देशमा जन आन्दोलन भयो । २०६३ सालमा पनि भिमसेनलाई पसिना आएको थियो र देशमा लोकतान्त्रीक व्यवस्था स्थापना भएको थियो ।
यस अघि २०७१ साल मँसिर ३० र फागुन १३ गते गरी एकै बर्ष दुई पटक पसिना आएको थियो । भिमसेनलाई पसिना आएको पछिल्लो बर्ष अर्थात २०७२ साल बैशाख १२ गते नेपालमा विनाशकारी भुकम्प गएर करिव ९ हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो ।
२७ वर्षीय श्रृजनाले काठमाडौँ मै जन्म दिईन तिम्ल्याहा सन्तान: पहिला डर, अहिले उत्साह